टिकापुर घटनामा दिंवगत प्रहरी निरीक्षकका छोराछोरीको प्रधानमंत्रीलाई खुलापत्र - Enepalese.com
टिकापुर घटनामा दिंवगत प्रहरी निरीक्षकका छोराछोरीको प्रधानमंत्रीलाई खुलापत्र
इनेप्लिज २०७४ चैत ९ गते १४:०९ मा प्रकाशित
सर्वप्रथम अत्यधिक बहुमतले प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा बधाई छ । आज तपाई प्रधानमन्त्री भएको करिब एक महिनापछि हामी चार भाईबहिनी तपाईंलाई एउटा घटना स्मरण गराउन चाहन्छौँ । तपाईले पत्रपत्रिकाबाट पक्कै पनि खबर सुन्नुभएको हुनुपर्छ, २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहित ५ जना प्रहरी र २ जना सशस्त्र प्रहरीको हत्या भएको थियो । त्यही घटनामा एकजना डेढ वर्षे नाबालकले समेत अकाल ज्यान गुमाउनु प¥यो ।
त्यहाँ हामिलाइ संसार देखाउने, धेरै माया गर्नुहुने हाम्रा बाबा प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्टको पनि हत्या गरिएको थियो, सोही घटनामा । हामीलाई राजनीति र यस्ता अरूकुराबारे केही थाहा थिएन पहिले, अहिले पनि त्यसबारे ज्यादातर चासो राख्दैनौँ । जब कर्तव्यपालनका सिलसिलामा आपराधिक समूहद्वारा प्रहरीको निर्मम हत्या गरियो, हाम्री आमाको सिन्दुर पुछियो र हामीलाई टुहुरा बनाइयो– हामी यति विक्षिप्त भयौँ कि कयौँ दिनसम्म हामीलाइ केहीथाहा भएन, के भइरहेको छ । भनौँ न हामी अँध्यारो सुरुङभित्र पसेझैँ भयौँ । केही पनि देखेनौँ अगाडिको बाटो ।
निकैपछि मात्रै थाहा भयो– हाम्रा बुबालाई आन्दोलनकारीले हत्या गरेका रहेछन्, उहाँका सहकर्मीहरुसँगै । देश र जनताको सुरक्षमा खटिएका प्रहरीलाई भाला बन्जरोले हानेर मारे त कतिलाइ जीउँदै जलाइयो भनेर सुनेपछि उत्पन्न मुटुको जलन अहिलेसम्म सेलाएको छैन ।
त्यसरी घरघर भोट माग्न जाँदापनि पुलिसले किन पक्राउ गरेन ? आज हामी यो मात्र हैन हामी धेरै प्रश्न गर्न चाहन्छौँ तपाईंलाई । अनि त्यसरी अभियुक्त मान्छेलाइ बचाउन किन खोजिरहनुभएको छ ? उसलाइ पनि सरकारको मन्त्री बनाउन खोज्नुभएको हो कि ?अपराधीलाई सांसद् प्रहरी बनाएर कस्तो सुशासनको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ तपाईं ?
सरकारले हत्या–आरोपमा खोजी गरिरहेको मान्छेलाई राजनीतिको आवरणमा जोगाएर कसैले उसलाई जोगाउन चाहन्छ भने भगवानले उसलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैनन् । अझै पनि न्यायको आशा छ । त्यो नरसंहारको एकजना मुख्य अभियुक्त अझै पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छ रे । कुनैपनि बाहनामा उसलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको हामीलाई थप अन्याय गर्नु हो । यसरी पीडितको घाउमा नुनचुक लगाउनुले हामीले राज्यबाट
के आशा गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ?
टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारको आरोपमा पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेको व्यक्तिलाई जेलभित्रै शपथ खुवाउने सरकारको आश्वासन र अनसन टुटाउन गृहमन्त्रीज्यूले जुस पिलाउँदा हामी विष पिएर सरह प्रताडित छौँ । हामी निराश मात्र हैन प्रधानमन्त्रीज्यू, लज्जित पनि भएका छौँ ।
राज्यले हामी पीडितभन्दा बढी क्षतिपूर्ति पनि त्यही पीडकले पाएको छ भन्ने पनि शायद यहाँलाई अवगत नै छ होला । सान्तवना, संरक्षण, राज्यको स्नेह पनि पीडकले पीडितभन्दा बढी पाएको छ ।
यहि थिति बसाल्ने हो र यसैका लागि तपाईंको आफ्नो पनि आजन्म संघर्ष थियो भने हामी असहायको भन्नु केही छैन । अहिले अपराधीका गोहीका आँसु र उसको राजनीतिको पाखण्डले तपाईं गल्नुहुन्छ भने तपाईंको अभिवावकत्वमा रहेको राज्यले के अनभूति गर्ने ?अपराधीहरुले हामीबाटहाम्रा बुवा गुमाएकोलामोसमयभईसक्दा पनि चौबिसै घण्टा आँसुु बगाइरहेका छौँ, हामीले के आशा गर्ने ? हाम्रो आँसुको पनि मूल्य छ र निष्ठा–नैतीकताको पनि स्थान हुन्छ भने तुरुन्तै टीकापुर घटनाको योजना बुन्ने र हाम्रा पिताको विभत्स हत्या गर्नेलाई आजन्म कारावासको सजाय होस् ।
प्रधानमन्त्र ज्यू यो पत्र तपाईसम्म त पुग्छ पुग्दैन । हामी राजनीति र समाचार जान्ने÷बुझ्ने अवस्थाका पनि छैनौँ । यी शब्दहरु हाम्रा आँसु आशा दुवै हुन् । सम्माननीयज्यूलाई हामी धन्यवाद भनेर यसरी नै पत्र लेख्नेछौँ, जुन दिन हामी न्याय पाएको अनुभुति गर्नेछौँ ।